Ilhaan Cumar oo furriin dalbatay – Washington Post | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ilhaan Cumar oo furriin dalbatay – Washington Post
Ilhaan Cumar oo furriin dalbatay – Washington Post
(Hadalsame) 07 Okt 2019 – Xildhibaanadda Ilhaan Cumar ayaa la sheegayaa inay galaysay codsi furriin, iyadoo ku doodaysa inay jirto xasarad aan la xallin karin oo kala dhexeeysa ninkeeda oo ay u dhashay 3 carruur ah, sida ku qoran New York Post.Kiiskan ka dhanka ah ninkeeda Ahmed Hirsi ayaa la sheegayaa in ay Ilhaan Maxkamadda gaarsiisey Jimcihii.
Dacwaddan ayaa imanaysa jeer ay horay usoo baxayeen eedo ku saabsan in ay uu jiro xiriir qarsoodi ah oo ka dhexeeya iyada iyo la taliyeheeda siyaasadeed ee Tim Mynett.
Cumar, oo 38 jir ah ayay Xersi munaasabad diineed isku guursadeen 2002-dii. Waxaa la sheegay in ay mar kala tageen 2008 kaddibna ay markale isku noqdeen 2018-kii.
“Waxaa jira jab aan la kabi karin oo ku jira xiriirkan guur,” ayaa ku dhigan dokumentiga loo gudbiyay Maxkamadda Minnesota.
Previous articleWuxuu yiri ”makula fariisan karaa?”, waxay tiri ”Ma waxaad i mooddey dumarka jirkooda ka ganacsada?!” – Bal dhowr waxa uu ku dhigo kaddib
Next article”Maxaad 100 sano ka qabanayseen Aljeeriya haddii ay weli gabdhohoodu XIJAABAN yihiin!”